Indlela yokukhangela inhlanhla, imali kunye nothando ngomnyaka we-Firecracker: Iimfundiso zobugqi
Ngomhla woNyaka omtsha, xa umlingo uba ngunkosikazi wehlabathi kunye nemimangaliso eyenzekayo, lixesha lokufumana inhlanhla "ngomsila." Yaye oku akuthethi nje ukufanisa. Ukuza 2017 ngumnyaka we-Firecracker. Uthembisa ininzi inhlanhla, ukuchuma kwemali kunye nempumelelo ngothando kumntu oya kukwazi ukumbamba ngomsila uvutha ngembala yomlilo. Yenza ngaphandle kolwazi olukhethekileyo kwaye uqeqesho lomlingo aluyi kusebenza. Ngako oko, sigqoke ingubo yomlingo onobuhle, ehlanjwe elukholweni, sizigcina zixhobo zoMatshini zoNyaka weNtsha kwaye sibeka i-Rooster "bait". Basebenza, kholani, nakanjani!
I-New Year Talismans yeLuck
Ngomnyaka we-Rooster, umntu makenze isithethe somlingo esiya kumnceda umnini wonyaka ka-2017 kwaye atyelele inhlanhla eya kunceda ukuphumeza isicwangciso. Ngo-Eva onguNyaka omtsha, thengisa umtsalane okhangayo we-Rooster (ithoyizi okanye isiteti), kwaye kuxhomekeke ekubeni ngubani ofuna inhlanhla - indoda okanye ibhinqa-ibophe i-bouquet okanye ifly butterfly kuyo. Isaphetha siya kubonakalisa inhlanhla kwimizamo yabasetyhini (intsapho, umntwana, ucoceke), kunye neflyflyfly kumadoda (umsebenzi, ukukhuthazwa, impumelelo yezemidlalo). Ngexesha lokudibanisa iidibhoni, qulunqa ngokucacileyo umnqweno wakho. I-Smart Rooster-mascot ibeka phantsi komthi, vumela unyaka wakho onenhlanhla, uya kudibana nawe.
Iipaliti zisebenza kakuhle kunye neentlanzi. Ukuqhuba umcimbi woNyaka omtsha, uya kuyidinga: ipinki yaseNgesi, isonka esimhlophe, iimali ezine, ikhandlela eliluhlaza, 1 tbsp. i-spoonful ishukela, ityuwa kunye nelayisi omhlophe. Khanyisa ikhandlela phakathi kobusuku. Kwi-saucer uthele ilayisi, ityuwa, iswekile, gcoba i-pin. Kwiimida zeeslayidi ezivela kwiinkozo, yakha isikwere uze uthi ngokuzwakalayo: "Intaba ityhola inhlanhla yona, ipini ininika yona." Xa ukhanyisa ikhandlela, qokelela imali kunye neenduli ngesikhwama, kwaye uhlale uphatha ipini kunye nawe kwicala elingalunganga leengubo.
Unyaka omtsha wobugcisa
I-rooster ifanekisela ukuchuma, kwaye kuyimfuneko ukuyiphatha ngqolowa, ukwenzela ukuba iya kuba nomnene kuwe ngonyaka ozayo. Ebusuku bobusuku, ukuphosa ingqolowa (ingqolowa okanye i-rye) kwiwashi yomthi, uthi: "10 uza kuzalwa omnye, ukususela kwi-10 ukuya kwi-100, ukusuka kwi-100 kuya kweyinye iwaka, ukuze imali iphinde ivela kum (igama lakho), endlwini yam iya kuhlala iphande ! "Kuya kubakho ukususa intlobo" ehlwayelwayo "ngoJanuwari 2. Gcina isikhwama sembewu yesinkwa kuze kufike entwasahlobo kwindawo eyomileyo, kunye nokufika kobushushu, ubeke phantsi. Isivuno esizayo sisetyenziselwa uhlanga olutsha olulandelayo. "Umjikelezo wesonka" uya kubangela ukukhula kwentlalo yakho.
Ngomhla woNyaka omtsha we-Eve kwindawo entsha yekhredithi ibhajethi enkulu. Ukubopha isikhwama ngebhedi yegolide kwaye uthi: "I-bill enkulu inqwenela ukunyusa imali, unyaka uya kwandisa kwaye iphucule, indlela eya kulandelwa iya kulandelwa, ndiza kuba nobutyebi!" Ngethuba lonyaka, kuyo yonke imali efunyenweyo, yibeke ibhajethi kwisikhwama. "Incubator" isusa kwisilingo sokusebenzisa inzuzo. Ukuqokelela inani elimele lichithe ngaphambi koNyaka omtsha olulandelayo kwizinto ezilungileyo kuwe.
Iimfundiso zonyaka omtsha zothando
Kwiintsuku ezi-7 ngaphambi koNyaka omtsha, uthenge imvulophu ebomvu kunye ne-7 yamaphecana afanayo (anokuba ngesimo seentliziyo). Kwimvulophu ebhalwe inki ebomnyama "Love Magnet", kunye nephepha lokuqala - umgangatho oyintloko ofuna ukuwufumana kumthandi wakho. Faka iqabunga kwi mvulophu. Qhubeka udala umfanekiso womntu wakho, utyalomali imihla ngemihla kwiqabunga elitsha ngomgangatho omtsha. Ngomhla woNyaka omtsha, tyikitya imvulophu kunye nemfazwe ye-chimes, ziqagele wena "umntu odale", ucinga ukuba ukhangeka njani kuwe njengemagnethi.
Uthando lomlingo we-champagne
Faka intliziyo kwiimandarins phantsi komthi omtsha weNyaka. Beka ezimbini iiglasi zewayini ngaphakathi, kwaye xa iwashi ixabisa i-New Year's middle night, tshela i-champagne kwiiglasi, uthi: "Ndiyityhala i-champagne, ndiyazigweba ukuzibulala!" Igrlasi yewayini, kunye neyesibini, uthele ngaphandle kwefestile, ucinga indlela ekhangeleka ngayo ijikeleza kwihlabathi efuna wakho othandekayo. Hlala uqinisekile ngokuqinisekileyo ukuba ubusuku bomlingo buye lwamkela umyalelo wakho!
Ngaba kufanelekile ukukholelwa kwimandla engaphezulu?
I-Horoscope ngo-2010: uphawu lwe-Aquarius
50 iingcamango ezinokutshintsha ubomi bakho
IHoroscope ye-scorpion ngonyaka we-tiger
IHoroscope ngenkunzi yegusha, eyazalwa ngonyaka we-tiger
I-horoscope ngayinye kwiintsuku zokuphela kwelanga
Amasundu awaziwayo kakhulu emhlabeni
Ikhekhe kunye namazambane
Ukukhulisa umntwana wexesha lokufunda
I-pie nenkukhu kunye nebhekoni
Ugqirha wezilwanyana odumile uVyacheslav Kaminsky
Amakhowe abhaka kwihovini: zokupheka ezilula kunye ezingavamile kunye nesithombe
Iitrobhu ezisetyenziselwa ukuncelisa
Ukuvuvukala kwemiphunga (i-pneumonia)
Ukuba ngumfazi kulula: iqoqo elitsha lehlobo-ehlobo laseBizzroro
Indlela yokugwenga ibhatyi?
Ukuxhamla kunye nokuqokelela i-birch
Indlela elula kaAllen Carr yokunciphisa umzimba
Amaphiko enkukhu nge-sauce.